Rosia:Fikatsahana ny rariny amin’ny fametrahana verin-drohy sy fanapariahana lahatsoratra · Global Voices teny Malagasy
Rosia:Fikatsahana ny rariny amin'ny fametrahana verin-drohy sy fanapariahana lahatsoratra
Voadika ny 27 Febroary 2010 6:17 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, македонски, Español, English
Lasa sehatra fanehoan'ny vahoaka ny hatezerany noho ny tsy fisian'ny sazy mifandraika ampiharina amin'ireo tomponandraikim-panjakana mpanao kolikoly sy ny fianakavian'izy ireny manitsakitsaka lalàna ny tontolon'ny fitorahana bolongana rosiana amin'izao. Fikarohana blaogy faran'izay tsotra dia ampy hahazoana lahatsoratra marobe manakiana ny mpitandro filaminana Rosiana, ny loholona, ary ireo governora izay minia tsy mahalàla lalàna ary dia miala bàla tsotra izao ny amin'izay mety ho vokatry ny fandraisany kolikoly, fanaovana aferafera maloto na hatramin'ny resaka vono-olona.
Saingy izany fahasorenana faobe mivoaka amin'ny aterineto izany dia tsy mitarika foana ho amin'ny fanovàna ny tena andavanandrom-piainana. Tantara iray vao haingana mikasika lozam-pifamoivoizana no isan'ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra anaty aterineto sy manerana ireo tanàna Siberiana mba ho fanehoana hoe manao ahoana ny ezaka raisin'izany fanentanana tsy nomanina izany hiantraika amin'ny tena zava-misy.
Raha atao jery maika, eto Rosia dia tsy zava-baovao ny tantaran'i Anna Shavenkova izay nanitsaka vehivavy roa teo ampamiliana ny Toyota nentiny tamin'ny 02 Desanbra 2009, tao Irkutsk. An'arivony ny olona maty noho ny loza an-dalambe isam-bolana. Saingy naka loko hafa kosa ny tantara nony hitan'ny olona fa hay i Anna ka zanakavavin'i Lyudmila Shavenkova, filohan'ny komitim-pifidianana ao amin'ny faritr'i Irkutsk, izay manana ny tanjany tokoa amin'ny fandehanan-javatra rehetra ao amin'io lafintany iray eto amin'ny firenena io.
Ilay video manelingelina [ENG] momba ilay loza, izay esorin'ny Youtube foana, dia navoakan'ireo media hafa koa ary, tany am-piandohana, dia tsy niteraka resabe loatra teo anivon'ny aterineto. Ny mpitoraka blaogy sasany dia manamarika ny tsy firaikàn'ny olona (mpandalo) izay manohy ny diany toy ireny hoe tsy nisy na inona na inona niseho ireny akory. Be ny tezitra fa Anna, ilay mpamily, dia nivoaka ny fiara ary tonga dia niantso olona an-telefaonina avy hatrany (tsy ny fiaran'ny mpamonjy voina) raha tokony ho mba nijery izay nahazo ireo niharan-doza aloha (maty tany amin'ny toeram-pitsaboana ny iray tamin'izy ireo andro maro taty aoriana).
Fa ny tena niteraka ranitra ho an'ireo blaogy maro dia ny valin'ny fanadihadian'ny mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana ao Irkutsk momba ilay lozam-pifamoivoizana. Anna dia noraisina ho vavolombelona nanatri-maso ny loza nefa dia izy izao mihitsy no namily ny fiara sy nampakatra azy teny amin'ny làlana natao ho an'ny mpandeha an-tongotra.
Ilay mpitoraka blaogy malaza sady mpikambana ao amin'ny “The Other Russia” na “Rosia amin'ny endriny hafa” fivondronan'ny mpanohitra [EN] Marina Litvinovich ( LJ user abstract2001) dia nitondra fanamarihana momba azy ity ao anaty lahatsoratra ao amin'ny blaoginy [RUS] izay nalaky nahasintona mpitsidika an'arivony sy fanehoan-kevitra an-jatony:
Maro no mahatsiaro ilay video avy any Irkutsk izay nahazoana an-tsary avy amin'ny camera ny lozam-pifamoivoizana iray. Ny olona nahatonga azy ity, Anna Shavenkova, nandona tovovavy roa tao afovoan'i Irkutsk tao anatin'ny firimorimoana mafy, dia tampoka teo lasa vavolombelona sy tsy ilay hany tokona tomponandraikitra amin'ilay loza. Tsy mbola namaritra mihitsy ny fitsarana hatreto hoe iza no tompon'andraikitra. Mety ho ilay fiara no hotondroina ho tomponandraikitra. Ary Anna Shavenkova kosa dia sendra teo amin'ny sezan'ny mpamily fotsiny. Vavolombelona nanatri-maso fotsiny e.
Litvinovich dia nanainga ny mpitoraka blaogy rehetra mba hamerina hamoaka indray ity vaovao ity amin'ny aterineto amin'ny fanantenana ny mety mba hitodihan'ireo media amin'izy ity. Noho ny toro-hevitra avy amin'ny namana iray mpitoraka blaogy, dia nasiany bokotra iray “re-post” eny am-pamaranana ny lahatsorany mba hahamora ny fanapariahan'ny tsirairay ny vaovao.
Betsaka ny mpitoraka blaogy namaly tamin'ny alalan'ny fametrahana rohy mankany amin'ny blaogin'i Litvinovich (ny valin-kafatra tena be mpandefa dia ny hoe “naveriko navoaka ‘I re-posted'”) ary maneho ny ahiahy lalina avy amin'izy ireo momba izay ho fandraisana an-tanan'ny tomponandraikitra ao an-toerana ny raharaha.
Misy ampahany amin'ireo mpamaky eo anivon'ny aterineto no manaiky ny halemen'ny lalàna ao Rosia manolona ireo olona eo amin'ny fitondrana ary mangataka asa mivaingana. Ilay mpitoraka blaogy tvn1, ohatra, dia nanoratra [RUS] fa tsy misy afaka manome tsiny renim-pianakaviana iray miezaka miaro ny zananivavy mba tsy hiharan'ny sazy. Setrin'izay, ilay mpitoraka blaogy dia misarika ny saina hitodika amin'izay olona nahatonga ny iray hafa ho afa-mipetraka ambonin'ny lalàna:
Tokony homentsika felaka tehamaina mandrivorivo mba ho anatra ireo mpitsara sy mpitandro filaminana ireo. Noho izy ireo, ny mpandray kolikoly, ny tsy fanarahan-dalàna dia nanjary zava-panao. Tokony hanaraka ny ohatra omen'i Greece, Frantsa, sns …isika. Ny vahoaka any mirotsaka an-dalambe, mampiasa ny herin'ny fanoitra (crowbars), ny cocktails Molotov sy ny fitaovana hafa koa mba hampahatsiahivana ny manampahefana fa mpanompon'ny vahoaka izy ireo fa tsy ny mifanohitra amin'izay akory.
Ireo soso-kevitra “felaka tehamaina” ho an'ny manampahefana sy “firotsahana an-dalambe” dia tsy vitsy mihitsy eo anivon'ireo mpitoraka blaogy.
Ny sasany milaza ankolaka fa ny “tsy fanarahan-dalàna” dia hadisoan'ireo izay nifidy an'ireny manampahefana ireny. Ilay mpampiasa LJ toytronic dia nanoratra [RUS]:
“Namidin'ny” manampahefana foana ny vahoaka teto amin'ity firenena ity. Vakio ny tantara! Tokony hifaly ianao fa mbola avela hahatsapa fahalalahana ao amin'ny Livejournal [sehatra fitorahana blaogy be mpampiasa ao Rosia – V.I.]! Ianareo no isan'ny nifidy ny tenimidina sy ny fanjakan'ny maro an'isa ao amin'ny antenimiera, ary dia nahazo ny kolikoly ambongadiny ianareo, ny fisamantsamahana tanteraka eo amin'ny Ministeran'ny Atitany sy ny Antenimiera rakotry ny mpiasam-panjakana mpanao kolikoly. Mankaloiloy ny mijery izany! Nanana fotoana nahafahana nifidy fiarahamonina demokratika ianareo tany amin'ny faramparan'ny taona 90 tany! Raha tsy manokatra tsara ny sainy ny vahoaka, dia hiverina indray ny tamin'ny taona 1937 [Ny fanadiovna goavana tao Rosia ‘the Great Purges period in Russia’ – V.I.]!
Mpitoraka blaogy iray hafa no miantso fandraisana andraikitra mafonja amin'ny fifidianana anatiny sy isam-paritra mba hanakanana ireo mpanao politika mpanao kolikoly tsy hahazo fahefana.
Iray amin'ireo lahatsoratra be mpamaky amin'izao fotoana eo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy Rosiana ny an'i Litvinovich, mitàna hatrany ny loha-laharana amin'ny fandaharana ireo fampidiran-dahatsoratra eto amin'ny aterineto. Sahala amin'ny tratran'ny mpanoratra ihany ny tanjony hanaitra ny sain'ireo mpampiasa aterineto momba ity olana ity.
Nefa mbola somary manjavozavo ihany raha ny ho fisian'ny fiantraikan'ity fanentanana virtoaly tsy nomanina ity eo amin'ny andavanandrom-piainana. Toa resy lahatra i Litvinovich fa hanova zavatra ho amin'ny tsaratsara kokoa izy ity. Ho valin'ny fanamarihana iray misalasala ny amin'ny tena hisian'ny fiantraikan'ilay famerenana mamoaka lahatsoratra (re-posting), feno toky i Litvinovich nametraka hoe:
Ny efa niainana no maneho fa, amin'ny fisarihana fotsiny ny saina, afaka mahavita zavatra betsaka ny olona iray. Ohatra, ny fitsarana sy ny fanadihadiana dia hikirakira ity olana ity amin'ny fomba hafa tsy toy izay efa fanaon-dry zareo hatreto. Raha tsy manampy izy ity, dia hihevitra izay fomba hafa azo atao indray isika.